Igumbi kwivilla entliziyweni kaBrianza - I-Airbnb
Igumbi kwivilla entliziyweni kaBrianza
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguMichaela
Igumbi elifudumeleyo kunye nolwamkelo kwi-villa esentliziyweni kaBrianza.
Yonwabela uhlaza lukaBrianza kwigumbi elifudumeleyo nelamkelekileyo elinemiqadi yeplanga kunye nemibono yegadi. Relax kwigumbi lokuhlambela lanamhlanje elinemibala yothando kunye ne-balcony yangasese. Yiva ivumba leentyatyambo kunye nobushushu belanga kwi-terrace yegadi.
Igumbi elikhulu eliqaqambileyo elibekwe kwi-villa esanda kugqitywa, libonelela ngezinto ezintle kunye nazo zonke izinto ezithuthuzelayo zeendwendwe zethu. Igumbi libekwe kumgangatho wokuqala kweyona ndawo inoxolo yendlu. Inefestile enkulu ejonge emazantsi eqaqambileyo kakhulu kunye nesibhakabhaka ukonwabela umbono wesibhakabhaka.
Igumbi lixhotyiswe ngebhedi ephindwe kabini, i-wardrobe enkulu, idesika, i-wifi, i-smart TV, i-air conditioning kunye nokufudumeza ngaphantsi. Ifestile ixhotyiswe nge-Venetian blind kunye ne-skylight ene-roller shutter yombane.
Igumbi lokuhlambela langasese likhululekile kakhulu, lixhotyiswe ngendlu yangasese, i-bidet, i-sink, i-towel rail efudumele kunye neshawari enkulu. Ikwanayo nebalcony yabucala.
Indlu ikhanya ubusuku bonke kwaye ikhuselwe yi-alarm.
4.98 · Izimvo eziyi-116
IBarzago yilali encinci esembindini weBrianza eluhlaza, indawo yaseLombardy, emantla eMilan nakumazantsi eLake Como. I-Brianza ibekwe kumbindi weNgingqi yeLakes, eneneni imizimba emininzi yamanzi kunye namachibi amancinci, enamachaphaza, yinto ebambekayo kwaye engenakubuyiselwa indawo yayo. Barzago ibekwe kwindawo yobuchule ukutyelela izixeko ezintle ezifana Como (23 km), Lecco (20 km), Bellagio (33 km) kunye nezinye izixeko ezininzi ezibekwe kunxweme Lake Como. Kufuphi kwakhona kukho izixeko ezizele yimbali kunye nobugcisa obufana neBergamo (40 km), Monza (25 km) kunye neMilan (40 km).
IiAlps zangaphambili zeLecco ezenza ngasemva kumhlaba weBarzago kwaye zinokunconywa ukusuka kwindawo yoqwalaselo ebekwe phezulu edolophini, zibonelela ngamathuba amaninzi okunyuka intaba, ezendalo kunye nokutyibiliza ekhephini ngexesha lasebusika.
Isidlo sakusasa esincinci sinikezelwa yintsapho yethu (i-brioche, i-toast, ibhotela, i-jam, i-tea, ikofu, ubisi, amanzi).
Sithetha isiTaliyane, isiNgesi nesiCzech.
Sinikezela ngokufumaneka okuphezulu kokungena kwaye ujonge. Ukutshaya kuvunyelwe ngaphandle kwendlu kuphela.
Sithetha isiTaliyane, isiNgesi nesiCzech…
Iilwimi: Čeština, English, Italiano
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Barzago